10 TALOOYIN BEERALEYDA CAAJIS AH AMA SIDA LOO SAMEEYO MEEL LOO DHIGO MEEL LAGU NASIYO? - WARARKA
Intee jeer ayay dhacdaa markaad timaaddo guriga si aad u nasato oo natiijo ahaan, maalmaha oo dhan isku xiga waxaad sameysaan ganacsi iyo dalxiis oo keliya? Qaar badani waxay qabaan dhibaatooyin isku mid ah, inkasta oo dalkaygu uu jeclaan lahaa in aan ku raaxeysto oo aan ku raaxaysto nabadda.
Marka xigta, waxaan tixgelineynaa talooyin kaa caawin kara casriyeynta iyo bedelida aqalkaaga si ay u noqoto mid asal ahaan loo abuuro madadaalo.
Goob fasax ah
Dhab ahaan, xiriirka halkan waa mid sahlan in la fahmo. Sariiraha badan ee aad sameysid, shaqada aad u baahantahay.
Sidaa daraadeed, marka hore, isku day inaad wax badan ka qabatid wadanka si aad u hesho nasasho badan: dooro aagga isgaadhsiinta ee shirkadda, kala saar laba geesood oo jimicsi ah oo ku saabsan fekerka iyo kalsoonida.
Dabcan, ma diidi kartid sariiraha. Waxaad siisaa meel yar, si ay wax soo saarku u yaraadaan, baro habab badan oo wax soo saar badan oo beerista ah. Tusaale ahaan, wax ka barto sariiro qoyan oo qoyan, jardiinooyinka iyo wixii la mid ah.
Wixii ku saabsan booska madadaalada waa in la xuso iyo faahfaahin kale oo muhiim ah. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo qalabkaas iyo dhismayaasha kuwaasi oo si sahlan loo ilaalin karo lana nadiifin karo.
Ka fikir fursadaha wakhtiga firaaqada ee kala duwan kahor iyo hubso in cadadka ugu yar ee nadiifinta ka dib marka loo baahdo.
Geedaha ayaa isku daryeeli kara naftooda
Haddii aadan rabin inaad waqti badan ku bixiso jaridda dhirta, kaliya dooran kartaa dhirta oo la qabsan kara haramaha. Dhab ahaantii, dhirta noocan oo kale ah ma saameyn karaan haramaha iyo sicirka sarre ee xitaa waxay xitaa qulqulayaan haramaha qaarkood.
Halkan waa liisto tusaalooyin ah koobiyaal wakhti dheer ah kuwaas oo adiga kaa caawin doona.:
Gooryaanka dhulka ee Kamchatka iyo guduud;
gentian jaalle ah.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhirta kuu oggolaanaya inaad abuurto halaboorka dhirta dilka ah.
Waxay kori doonaan sanado badan, laakiin uma baahnid inaad dib u soo celiso, kaliya waxay ubaahantahay in la xakameeyo baaxadda koritaanka ee xayndaabyada geedka dilka ah ama qoryaha.
Si arrintan loo sameeyo, qaado dhirta soo socda:
Fadhiyado (xajiyo iyo xayawaanka dooxada);
Gooryaanka dhulka (casaan iyo midab leh);
terry soapworm terry;
Dheecaan weyn Dororativnolistnye Podofillum thyroid iyo darmar;
guga lafa-gooyey iyo Canadian.
Markaad qorsheynayso beer, fiiri carrada ku yaal dhul kasta. Qeybta ugu hooseysa waa in lagu baaro si faahfaahsan ciqaabta iyo xaaladaha dheeraadka ah, tusaale ahaan iftiinka, qoyaanka. Sidaa darteed, meel kasta oo aad rabto inaad ku koraan dhirta, waxaad barataa shuruudaha iyo dooro dhirta oo kaliya iyada oo saldhig u ah shuruudaha ugu wanaagsan ee geedo la siiyey.
Iyada oo xulashadani, waxaad yareyneysaa kharashka daryeelka ee dhirta. Waxba kama baddalno dabeecadda, laakiin si isku mid ah ayey u jirtaa dabeecadda waana isticmaali kartaa.
Yaree sariiraha ubaxa iyo cawska
Meelahan waxay u baahanyihiin shaqo joogto ah, laakiin waxaad yareyn kartaa qarashyadan. Isticmaal waddooyinka beerta iyo naqshadeynta laga sameeyey jejeb iyo wax la mid ah. Dhalada ama dhagxaanta dhagxaanta uma baahna daaweyn waana bedel fiican oo haramaha.
Ujeedo in la yareeyo wakhtiga aad ku qaadatay beerta. Sidaas oo kale, wax yar naso oo ma arki doontid faraqa. Tusaale ahaan, ha cabin walwal kasto, si joogto ah u xaaq, sidaas darteed waxaad abuuri doontaa muuqaal soo jiidasho leh oo awood u leh in ay qarqiyaan haramaha.
Intaa waxaa dheer, isticmaal mulching ka alaabta oo aad heli karto. Qaado caleemaha dhacday, jilif iyo wax la mid ah. Ku rid duurka iyo dhirta kale si aad uga saarto caws.
Ha ku dhex tuurin noocyo farabadan. Xaqiiqdii, xitaa beerta lørels ayaa u muuqata mid aad u qurux badan, laakiin dad badan ayaa soo baxa løvetann. Inkastoo ay aad u sahlan tahay hadana inta badan way ka fiican tahay in laga tago løndagro beeral gooni ah oo raadso muuqaal caadi ah cawska.
Muddo sannad kasta ah, waxaad dooran kartaa dhirta oo sahlan oo u fiican inay koraan. Tusaale ahaan, xilliga dayrta, qaado rhubarb, taas oo u muuqata weyn oo ay ku faraxsan tahay succulent afkoda.
Xilliga xagaaga, zucchini dhirta iyo bocorka iftiinka. Fikrad ahaan uma baahna waraabin iyo caleemo fiican. Ha ku nadiifin waqti ku saabsan yaanyada u baahan cayayaanka beeraha iyo aqalka dhirta lagu koriyo, baradhada dhirta.
Intaa waxaa dheer, qaado laba geed oo geedo iyo dhir beer ah oo u muuqda mid weyn oo aan qabyo ahayn. Tufaaxa iyo currants cas waa xulashada ugu fiican.
Tayada ugu muhiimsan kuwa aan doonayn inay si adag uga shaqeeyaan dalka. Tusaale ahaan heerka hoose - waxay ogaadeen in weelka, isla markiiba la fuliyay. Miyuu ogaanin ama aanad diideyn - dhowr todobaad waxaad u baahan doontaa inaad fadhiisatid maalmo leh hoe.
Isticmaal kheyraad dheeraad ah
Haddii aad ka shaqeyso beerta waa mid aan caadi ahayn, ka dibna kuwa kuwa bixiya aan la ogaanin, kiisas badan oo noocaas ah waa kuwo qalaad. Tani waa in loo isticmaalo, dabcan, xaddidaad macquul ah, laakiin waa in la isticmaalaa.
Marka martidaadu kuu timaado, waxaad qorsheyn kartaa qorshaha shaqada si hufan oo faraxsan. Tusaale ahaan, si aad ugu daboosho rabitaanka cuntadaada kebabs. Sii carruurta waxyaallaha fudud sida adoo soo qaadaya berry, ha u ogolaadaan nimanka inay dhirta qaar ama wax kale qoobaan.
Dhab ahaan, ma jiraan wax su'aal ah oo ku saabsan sifo loo isticmaalo, dad badan ayaa runtii xiiseynaya in ay qabtaan shaqo qaar ka mid ah beerta oo ay la hadlaan dhirta. Haddii aad heysato xirfad aad adigu u leedahay abaabul, waxaad si sahal ah u sameysan kartaa asbuuc dhamaadka asxaabtaada saaxiibada faa'iido u leh beertaada.
Abuur mashaariicda la heli karo
Ha taxaddarin dhirta ay adagtahay inay koraan ama ay u baahan yihiin xaalado gaar ah.
Diirada keliya ee la awoodi karo. By habka, iyo tan waxaad ka heli kartaa badan oo runtii qiimo leh.
Baradhada iyo bocorka si fiican ayey u koraan waxaana laga yaabaa in ay noqoto mid sabab u noqota sharaf. Xoortay geedo badani uma baahna daryeel caafimaad, laakiin waxay u muuqataa mid weyn. Dhirta Apple waxay si fiican u koraan meelo kala duwan waxayna ku faraxsan yihiin ubax guga iyo miraha xilliga dayrta.
Mid kasta oo ka mid ah geedahaasi waa mid sahlan. Dhab ahaantii, waxaa jira tiro badan oo ka mid ah fursadaha noocan oo kale ah iyo ma aha wax xiiso leh in mashaariicdan oo kale ah ka badan si ay u koraan qaar ka mid ah qalaad.
Haddii aan banaaneyn
Samee ugu yaraan goosashada oo ku raaxeeyso waxyaabo cusub xagaaga iyo dayrta hore. Khudaarta qaar ayaa laga yaabaa in lagu keydiyo bisha Sebtembar, ka tago inta kale ee iibka dukaamada. Dad badan, diidmada banaanku waxay u muuqataa mid xiiso leh, laakiin habkan waxaad ku qaadan kartaa wakhti aad u yar oo aad ka heshid farxad aad u weyn oo ka timi fasaxa fasaxa.
Beertaada waxay u baahan tahay in lagu qeexo sanado badan. Markaas waxaad waqti yar ku qaadan kartaa mustaqbalka. Qiyaas cabbirka dhirta iyo geedooyinka la beeray, qaababka dhirta kala duwan.
Markaad fahamto sida uu beerta u kobcin lahaa, marka hore waxaad sameysaa go'aanka saxda ah. Sidaa darted, waad ku faraxsan tahay inaad aragto sida qorshahaagu u kobcayo ka dib markaad qorsheysatid beerta, dhirta lagu beeray loona habeeyey dhulka.